लामो समयदेखि बन्द रहेको विद्यालयहरु सञ्चालन गर्ने मिति तोक्यो सरकारले ? – Taja Khawar
लामो समयदेखि बन्द रहेको विद्यालयहरु सञ्चालन गर्ने मिति तोक्यो सरकारले ?
प्रकाशित मिति: आइतबार, भाद्र १३, २०७८ समय: ११:२५:१८
August 29, 2021SanamLeave A CommentOn लामो समयदेखि बन्द रहेको विद्यालयहरु सञ्चालन गर्ने मिति तोक्यो सरकारले ?
सप्तरी । महामारीका कारण लामो समयदेखि सप्तरीमा बन्द रहेका विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी १८वटै स्थानीय तहका विद्यालय सञ्चालन गर्न छलफल सुरु गरिएको हो । विद्यालय सञ्चालन गर्ने विषयमा स्थानीय तहका प्रमुखहरू छलफलमा जुटेका हुन् ।जिल्ला समवन्य समितिमा बसेको स्थानीय तहका प्रमुखको बैठकले विद्यालय सञ्चालनबारे छलफल गरेको राजविराज नगरपालिकाका प्रमुख शम्भुप्रसाद यादवले जानकारी दिनुभयो ।छलफलमा जिल्लामा हाल कोरोना महामारीको सङ्ख्या न्यून देखिएकाले विद्यालय सञ्चालन गर्नेबारे गहनरूपमा बहस भएको जनाउँदै स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी तत्काल विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने बताउनुभयो ।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
टन्सिलसील के हो टन्सिलकाे उपचार कसरी गर्ने ? थाहा पाउनुस
By Nepalnews -August 28, 2021031
जाडो मौसम सुरु भइसकेको छ। मौसमको बदलावसँगै चिसोसँग सम्बन्धित विभिन्न रोगले सताउन सक्छ। रुखा, खोकी, ज्वरो मात्र नभई टन्सिलको समस्याले पनि धेरैलाई पिरोल्ने गर्छ। मौसम परिवर्तनका बेलामा शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिहरू र बालबालिकालाई टन्सिलले दुःख दिन सक्छ।
घाँटीको प्रवेश बिन्दुमा दुइटा पिलरजस्ता ग्रन्थी हुन्छन्। यसलाई लिम्फ ग्रन्थी वा लिम्फ नोड पनि भनिन्छ। यसले कीटाणुविरुद्ध लडेर शरीरमा कीटाणुको प्रवेशलाई समेत रोक्ने काम गर्छ।
कसरी हुन्छ टन्सिल ?
तिनै ग्रन्थीहरू आफैंमा कीटाणुद्वारा संक्रमणको सिकार हुन सक्छन्। यस्तो अवस्थामा ती फुलेर राता हुन्छन्। यदि ती टन्सिल भाइरसका कारणले फुलेका हुन् भने ती राता मात्रै हुन्छन्, तिनमा पीप जमेको हुँदैन। तर यदि ब्याक्टेरियाको कारणले हो भने सेतो पीपजस्तो पदार्थ पनि जमेको देखिन्छ।
– घाँटी दुख्ने र निल्न गाह्रो हुने हुन्छ।
– कहिलेकाहीँ कान पनि दुख्छ।
– ज्वरो आउने र जिउ दुख्ने पनि हुन्छ।
– ब्याक्टेरियाको संक्रमणले भएको टन्सिलमा रक्त परीक्षण गर्दा श्वेत कोषिकाहरूको संख्या बढेको पाइन्छ।
Last Updated on: August 29th, 2021 at 11:25 am